कोरोना रोकथामका लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्वारा रु. १ करोड सहयोग
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमीटेडले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको सहयोग कोषलाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा जानकारी गराएको हो । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तरगत कोरोना कोषमा यो सहयोग उपलब्ध गराइएको प्रष्ट पारेको छ...
एशियन लाइफले प्रादेशिक स्तरमा स्थापित कोरोना कोषलाई रु. ३५ लाख दिने
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि क्रियाशील सातवटै प्रदेश सरकारहरुले स्थापना गरेका सहयोग कोषमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले रु. ३५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, यसका संचालक तथा सबै कर्मचारीहरुको तर्फबाट सो सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गरी...
कोभिड–१९ एक्सपर्ट भन्छन्– 'अबको ४ हप्तामा विश्वभर यो महामारी नियन्त्रणमा आउँछ'
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको सन्त्रासका बीच चीनबाट एउटा राम्रो खबर सार्वजनिक भएको छ। यो केवल चीनका लागिमात्र होइन विश्वकै राम्रो खबर हो। चीनका वरिष्ठ कोरोनाभइरस एक्सपर्ट डा झोङ नानशानले यो महामारी अब नियन्त्रणमा आउने दाबी गरेका छन्। उनको दाबी छ कि यो महामारी अबको ४ हप्तामा नियन्त्रणमा आउने पूरै विश्वमा पहिलेजस्तै सामान्य अवस्थामा...
कास्कीको ल्याबमा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण, सुनिश्चितताका लागि नमूना टेकू पठाइयो
काठमाण्डौ । कास्कीमा अर्को कोरोना संक्रमित फेला परेका चिकित्सकहरुले दाबी गरेका छन् । यदि यो दाबी सही सावित भयो भने यी देशका सातौं संक्रमित हुनेछन् । यसअघि ६ जनामा कोरोना संक्रमण फेला परिसकेको छ । ती ६ मध्ये १ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने बाँकी ५ जना आइसोलेसनमा छन् । भारतबाट केही दिनअघि आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको...
केही क्षेत्रको लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय
काठमाण्डौ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउन सीमित क्षेत्रमा भने खुकुलो हुने भएको छ । कोरोना १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम(सिसीएमसी)को बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सिसीएमसीका सदस्य तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको १० औं दिनमा आएर आफूहरुले अत्यावश्यक...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको सरकारी अभियानलाई नेपाल एसबीआई बैंकले पनि साथ दिएको छ । यो अभियानमा साथ दिंदै बैंकले रु. १ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । कुल रकममध्ये रु. ५० लाख संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा जम्मा गरिने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेश सरकारले स्थापना...
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रभु बैंक लिमीटेडले रु. १ करोड १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । चैत २० गते प्रभू बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत अशोक शेरचनले...
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगको संक्रमणर्ला फैलिन नदिने उद्देश्यले रोकथाम र नियन्त्रणमा लागेको सरकारले स्थापना गरेको सहयोग कोषमा नेपालका २२ व्टा वाणिज्य बैंकहरुले २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका देखिएको छ । बाँकी ५ वटा वाणिज्य बैंकले पनि सहयोग घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका नेपाल बैंकर्स संघले...
कोरोना रोकथामका लागि टेलिकमको रु. १२ करोड सहयोग
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । उक्त कोषमा कम्पनीको तर्फबाट १० करोड र कर्मचारीहरुका तर्फबाट २ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र...
छैठौं कोरोना संक्रमित बागलुङकी ६५ वर्षीया वृद्धा
काठमाण्डौ । नेपालमा भेटिएको छैठौ कोरोना भाइरस संक्रमित बागलुङकी ६५ वर्षीया वृद्धा रहेकी खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार देशको छैठौ संक्रमित ६५ वर्षीया वृद्धा महिला रहेकी जानकारी दिएका हुन् । उनको नमूना परीक्षण गर्दा बिहीबार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो । उनी घरमै रहेकी र थप उपचारका लागि...
फ्रान्सबाट आएकी युवती चढेको फ्लाइटबाट यात्रा गर्ने अन्य एकमा पनि कोरोना संक्रमण
काठमाण्डौ । नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित छैठौ व्यक्ति समेत फेला परेका छन् । छैठौ संक्रमित पनि दोहाबाट चैत ४ गते नेपाल आएको कतार एयरवेजको क्यूआर ६५२ नम्बरको फ्लाइटमा चढेका व्यक्ति रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । यो फ्लाइटमै यात्रा गर्ने अन्य २ जनालाई समेत यसअघि कोरोना संक्रमण फेला परेको...
कोरोना संक्रमणबाट बच्न एशियनजस्तै मास्क लगाउनुपर्नेमा अमेरिकी र यूरोपेली विज्ञ सहमत
काठमाण्डौ । आउने साताहरुमा एसिया बाहिरका देशका सरकारहरुले आफ्ना जनतालाई कोरोनाबाट बच्न फेस मास्क लगाउन सुुझाव दिन सक्नेछन् । तर, यो सुुझाव एसियाली देशका नागरिकका लागि भने एउटा रणनीतिको संकेत मात्रै हुुनेछ, जुुन संकटको सुुरुवातदेखि यस क्षेत्रका अधिकांश देशहरुमा अपनाइएको छ । तर, एसिया बाहिरका देशका सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरुले...
कमसल मेडिकल सामाग्री खरीदमा राज्यकोषको दोहन भयो: पूर्वराजा
काठमाण्डौ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चीनबाट मेडिकल सामान खरीदमा राज्यकोषको दोहन भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै चीनका मेडिकल सामाग्री विश्वका धेरै मुलुकले त्रुटिपूर्ण भन्दै फिर्ता गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भित्र्याएको र यसमा सरकारले सावधानी नअपनाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘कोरोनाविरूद्ध...